Daraasiin ka tirsan dhaawacyada ciidamada Axmed Madoobe oo la gaarsiiyey Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Daraasiin ka tirsan dhaawacyada ciidamada Axmed Madoobe oo la gaarsiiyey Gaalkacyo
9th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Ilaa 33 ka mid ah ciidamada maamulka JUBA ee shalay lagu dhaawacay dagaalkii Alshabaab kula wareegeen Jazeeradda Kudhaawaa ee gobolka Jubada Hoose ayaa maanta laga dejiyey garoonka diyaaradaha Gaalkacyo si halkaas loogu daweeyo.
Askrataan dhaawaca ah ee la geeyey Gaalkacyo ayaa qaar ka mid ah aad u liitaan sida uu sheegay dhaqtar ka tirsan Isbitaalka magaalada, wuxuuna xusay iney dedaal ku bixiniyaan sidii loola tacaali lahaa xaaladooda caafimaad.
Arrintaan ayaan muujineysa sida maamulka Juba uusan kalsooni ugu qabin Isbitaalada magaalada Muqdisho, iyagoo dhaawacyo markii 2-aad ay ka qaadeen Kismaayo dulmarsiiyey Muqdisho, kadibna ka dejiyey Gaalkacyo.
Muungaab oo sii wada safarada debadda ah & howlihii gobolka Banaadir oo gaabis ah
Maamulka Juba oo ka hadlay dagaalkii lagu hoobtay ee Kudhaa (Maxey sheegeen?)